Myanmar Entrepreneur Group: စမာနဂိုရ်က နွားမပေါင်ကျိူးလိမ့်မည်လော (အပိုင်း-၄)
Posted by : Khin Ma Ma Myo Posted @ 8:14 PM
Nge Naing October 27, 2008 at 3:00 PM
စီးပွားရေး၊ ငွေကြေး စတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိပ်နားမလည်တော့ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီးမှာ တော်တော်ကို ဗဟုသုတရပါတယ်။ သိပ်ကောင်းတဲ့ပို့စ်လေးဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကင်း November 4, 2008 at 3:13 AM
ဟုတ်တယ်ဗျာ... Nge Naing ပြောသလိုကျွန်တော်လဲတစ်ထပ်ထည်းပါပဲ။
MM March 10, 2009 at 6:53 PM
If we can download such kind of post asafile , it will be spreaded out among our people through email. Thank you. MMKT , singapore